E-Journal: Sex Liberation
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 3:43 PM
စာအရှည်ကြီးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် အချိန်ကုန်ခံရိုက်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖတ်လို့ကောင်းသဗျာ။ အခေါက်ခေါက်ဖတ်ဦးမယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါဗျို့။ :)
အခုလို စာကောင်းပေမွန်တွေကို ရိုက်ပြီးတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲဗျာ။ တော်တော်ဗဟုသုတရတယ်ဗျ
ဗဟုသုတ ရစေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အားလုံးရေးမည့်အစီအစဉ်ရှိလို့ ရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင် PDF လုပ်လိုက်ပါလားဗျ။ လုပ်ပြီးရင် ကျွန်တော့်ကို သံချောင်း ခေါက်လိုက်ဦးနော်။
yeah I wantabook too. :) Thanks for sharing brother.
အကြောင်း အရာလေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ စာတစ်အုပ်လုံးကတော့ မရိုက်နိုင်လောက်ဘူးဗျ။ အွန်လိုင်းနဲ့ ပီစီကိုသုံးရတာ အကန့်အသတ်ရှိနေလို့ပါ။ ပီဒီအပ်(ဖ) နဲ့တွေ့ရင် မျှဝေပါ့မယ်။ :)
သေချာ ဖတ်သွားပါတယ် ... ဗျဒ္ဓ ဘာသာရဲ့ သီလနဲက ပါတ်သက်တဲ့ အယူအဆ လေးတွေ ပါ ထည့်လိုက် ရင် ပို ပြည့်စုံသွားမှာ :)
ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဒီအကြောင်းအရာတွေ ခေါင်းထဲမှာ တွေးနေရလို့ ကျေးဇူးဗျာ။ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အမှတ်မထင် ပဲ။ ဒီဘလောက်ကိုတွေ့ ခဲ့ပေမယ့်။ အမှတ်တရ နဲ့ လာလာဖတ်နေပါ့မယ်။
အလည်လာမယ်ဆိုလို့ အမြဲကြိုဆိုနေကြောင်းပါ၊ ကိုအောင်ကြည်မင်းရေ။
ကောင်းတယ်ဗျာ လို့ဘဲပြောချင်တော့တယ် တကယ်ပါ လူတွေသိသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပါ.။